Ama-4 P we-Modern Search Engine Optimization | Martech Zone
Izwe le-SEO liyazamazama kancane ezindabeni zokuthi IMoz isika abasebenzi bayo phakathi. Bathi baphindeka kabili phansi ngokugxila kabusha ekusesheni. Bebeyiphayona nozakwethu obalulekile embonini ye-SEO iminyaka manje.
Umbono wami awunjalo unethemba ngomkhakha we-Organic Search, futhi angiqiniseki ukuthi kulapho iMoz kufanele iphindwe kabili khona. Ngenkathi iGoogle iqhubeka nokwakha ukunemba nemiphumela yekhwalithi ngobuhlakani bokuzenzela kanye nama-algorithms acwengekile, izidingo zokuqasha ababonisi bokusesha nabasebenzi ziyahamba. Futhi Amathuluzi we-SEO ziyavela masonto onke ezincintisana nokuthandwa yiMoz.
Eminyakeni emihlanu edlule, iningi lethu ukubonisana nokumaketha imizamo yanikelwa ku-SEO. Sibe nomhlaziyi wethu we-SEO. Phambi kweminyaka engu-5 futhi sisebenzisa amathuluzi amnandi avela kumxhasi wethu ku g Shift ezinikeza ukuqonda kuyo yonke indawo yethu yewebhu, hhayi ukusesha kwethu okuphilayo kuphela. Kuhlanganiswe ne- analytics kanye nabaphathi bewebhu, isisombululo se-gShift sisisiza ukuthi siqaphele imizamo yethu yokumaketha ye-omnichannel, kufaka phakathi ukusebenza kwezinto eziphilayo, ngaphezu kocwaningo olunamandla, ukutholakala kokuqukethwe, ukuqapha umkhiqizo, nokunye okuningi.
I-SEO ayiseyona imboni; kuyingxenye yemboni. Kuyisici endaweni yesikhulumi. Kuyisu ngaphakathi kwecebo lokumaketha ledijithali. Kudingeka ulwazi kumakethi ngamunye, hhayi isikhundla salo. Wonke umkhangisi kufanele aqonde ukuthi angazisebenzisa kanjani izinjini zokusesha ngaphakathi kwecebo eliphelele futhi aqonde ukuthi zingena kuphi emhlabeni wethu we-omnichannel. Isikhathi eside kakhulu, sibukele njengoba izinkampani ze-SEO namapulatifomu ephuthelwe yisikebhe ekusebenziseni ukuguqulwa, ukubhala okuqukethwe okuhle, nokunakekela kuholela ekuguqukeni. Isikhathi eside kakhulu, imboni ye-SEO ibilokhu imayelana nama-backlinks, amagama asemqoka, nezinga ngenkathi abathengi nezinjini zokusesha zithuthuka.
Ochwepheshe bazophikisana nami, kepha sinamakhulu amaklayenti achumayo ngokugxila kwethu okubuyekeziwe. Ngenkathi sisaqinisekisa ukuthi amasayithi amaklayenti ethu akhiwe ngokweluleka kwe-Google futhi siqhubeka nokuqapha izinga, akusikho lapho sisebenzisa khona iningi lemizamo yethu. Nginguye hhayi ukusho i-SEO ukuthi akubalulekile, kuseyisiteshi esiyinhloko sokutholwa. Ngithi ukutshalwa kwemali ku-SEO ngeke kuthole ukubuya kwamanye amasu. Lawo maqhinga ukukhushulwa komphakathi, ukukhushulwa okukhokhelwayo, ubudlelwane bomphakathi nokwakha umtapo wolwazi wokuqukethwe ongundunankulu.
Ukuphakanyiswa Komphakathi - Amathemba akho namakhasimende awavakasheli isiza sakho njalo. Kodwa-ke, bahlanganyela emphakathini. Ukuze uxhume lapho amathemba akho namakhasimende akho ekhona, kufanele ube ukwazisa okuqukethwe kwakho lapho kukhona. Lokho kukhulunywa ngemidiya yezenhlalo kuvame ukufinyelela izethameli ezintsha, ezithi bese zisidingida online, zakha igunya lethu lokusesha le-organic.
Iphromoshini ekhokhelwe - Ngenkathi singathanda i-WOM nokwabelana ngamagciwane kokuqukethwe ukukhulisa ukufinyelela kwemikhiqizo yethu, iqiniso elilula ukuthi ukukhangisa yibhuloho okufanele sitshale kulo ukuze sandise lokho kufinyelela. Lawo mathuba akhokhelwayo ngokuvamile afinyelela izethameli ezintsha, ezithi bese zisidingida online, zakha igunya lethu lokusesha le-organic.
Ezimayelana Nomphakathi - Ukuba neqembu lochwepheshe abafuna amathuba okwazisa ngomkhiqizo wakho nangethalente langaphakathi kufanele. Izindatshana ezivela ezincwadini ezifanele, izingxoxo kuma-podcast, namathuba okukhuluma esiwatholayo ngethimba lethu le-PR kukhiqize okusetshenzisiwe, igunya eliphezulu elikushoyo okusitholela igunya lokusesha.
Umtapo Wezincwadi Wokuqukethwe kukaNdunankulu - Okuqukethwe kwe-Evergreen akusasizi noma yimaphi amaklayenti ethu. Izindatshana eziphelele zocwaningo, ukwakheka, okuqukethwe okujulile, i-infographics, namaphepha amhlophe zithola ukubambeka okuningi. Esikhundleni sokugxila ekukhiqizeni okuqukethwe, sigxile ekwakheni umtapo wezincwadi wokuqukethwe ophelele, ophelele weklayenti ngalinye lethu.
Ingabe kukhona okuhlukile? Yebo kunjalo. Abakhiqizi bokuqukethwe kwamabhizinisi ezimbonini ezincintisana kakhulu basengathola onqenqemeni oluningi Search injini. Phindaphinda umthelela wezigidi zamakhasi futhi kuzoba nembuyiselo enhle kutshalomali. Kepha lezo zinkampani zihlukile, hhayi umthetho. Iningi lamabhizinisi lingangcono uma landa utshalomali kulezi zimiso ezine ezingenhla.
Tags: ukuxhuma emuvaAmagama angukhiyemozukukhushulwa okukhokhelwayookuqukethwe nguNdunankuluukukhiqizwa kokuqukethwe kukaNdunankuluezimayelana Nomphakathiseoukukhushulwa komphakathiiphepha elimhlopheI-Whitepaper
Sep 7, 2016 ngo-1: 58 PM
Isifinyezo esithandekayo, ngiyabonga.